Ireto ny vaovao havoakan'ny WhatsApp amin'ny fanavaozana manaraka | Vaovao momba ny gadget
Ireo no vaovao havoakan'ny WhatsApp amin'ny fanavaozana manaraka azy
Vaovao farany no andrasana amin'ny herinandro ho avy WhatsApp, kinova vaovao iray, izay vao sambany tao anatin'ny fotoana elaela, tsy vitan'ny fampiasa vaovao eo amin'ny sehatra fandefasan-kafatra fanta-daza fotsiny, fa, amin'ity indray mitoraka ity, dia hisy zava-baovao marobe ary, mazava ho azy, azo antoka fa ny sasany amin'izy ireo dia tsy ho tianao en tanteraka.
Izaho manokana dia tsy maintsy miaiky fa iray amin'ireo mpampiasa ilay sehatra tsy tiako loatra ny anjarany, fa tsy manolotra zavatra tsotra toy ny afaka mifandray amin'ny namanao sy ny fianakavianao, ireo tompon'andraikitra amin'izy ireo toa nandray fanapahan-kevitra hanova azy ho karazana snapchat rehash raha tokony hanohy hanatsara ny endriny ho fampiharana fandefasan-kafatra. Avelao hitokana kely izany rehetra izany, ireto no fizarana telo an'ny WhatsApp.
1 Ny toerana misy anao dia hozaraina amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny vondrona misy anao.
2 Azonao atao ny mamafa ny hafatra raha mbola tsy novakiana izy ireo.
3 Tonga amin'ny sehatra ireo fanambarana.
Ny toerana misy anao dia hozaraina amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny vondrona misy anao.
Ity dia iray amin'ireo vaovao izay tena tsy fantatrao marina raha mahasoa na tsia, samy hanana ny heviny momba azy ny tsirairay na ny marina aza dia, manomboka izao, ho afaka hahafantatra ny mpampiasa ny vondrona misy anao amin'ny fotoana rehetra misy anao no ahitanao.
Ny vondrona tsirairay izay misy anao manomboka izao dia haneho safidy vaovao hanehoana ny sarintany izay ahitàna teboka iray ny mpikambana rehetra. Ny ampahany tsara amin'izany rehetra izany, angamba izany no antony tsy dia mampanahy ahy manokana, dia izany amin'ny alàlan'ny toerana misy anao dia ho kilemaina ny toerana misy ireo vondrona ary tsy maintsy ianao no manome alalana ny fampiharana hampiseho ny toerana misy anao amin'ny mpikambana ao amin'ilay vondrona.
Azonao atao ny mamafa ny hafatra raha mbola tsy novakiana izy ireo.
Iray amin'ireo vaovao tsara hafa koa ny hoe, aorian'ny fiandrasana ela dia hamela anao ny WhatsApp amin'ny farany fafao izay karazana hafatra raha mbola tsy novakiana izy ireo avy amin'ny mpandray.
Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manafoana ny fandefasana hafatra alohan'ny hamakian'ny mpandray azy azy. Amin'izay fotoana izay dia mila mitandrina ianao satria, amin'ny lafiny iray, raha efa novakiana ny hafatra manokana dia tsy afaka hanao na inona na inona ianao, faharoa, ny zava-drehetra dia toa manondro fa ny mpandray ny hafatra dia ho hitanao ny fampandrenesana milaza fa voafafa ilay hafatra.
Tonga amin'ny sehatra ireo fanambarana.
Raha ny vaovao farany, toa WhatsApp dia hanana doka Na dia somary ho manokana aza izany satria afaka mifandray aminao mivantana ireo masoivoho amin'ny alàlan'ny mombamomba anao. Ny teboka lehibe indrindra amin'ny fifanakalozan-kevitra dia ny fahazoan'izy ireo miditra amin'ny angon-drakitra sasany mba hahafantaran'izy ireo tsara izay tokony hatolony antsika hanakatona ny varotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Ireo no vaovao havoakan'ny WhatsApp amin'ny fanavaozana manaraka azy
Fanavaozana bebe kokoa amin'ny Nougat 7.0, amin'ity tranga ity ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge
Olana bebe kokoa ho an'ny Google Pixel, amin'ity indray mandeha ity ny mikrô sy ny fametahana ratsy azy